ozi azụmahịa 2
Site na mmepe na-aga n’ihu nke ndụ anyị nke oge a, n’otu ụzọ, ọnọdụ ibi ndụ anyị anwoola etu o kwesịrị. Nke a abụghị naanị nsonaazụ nke mbọ ndị China anyị na-aga n'ihu, kama ọ bụ nsonaazụ nke mbọ na-aga n’ihu nke sayensị na teknụzụ anyị. Yabụ, anyị nwere echiche dị iche iche maka ihe na-aga n’ihu na itinye ihe nke ihe dị iche iche E nwere ọtụtụ echiche dị iche iche na echiche ngwa maka ihe mara mma. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, mmepe nke ụlọ ọrụ China na-adị ngwa ngwa, nke nyere nnukwu ohere mmepe maka ụlọ ọrụ mmepụta China.
Site na mmepe na-aga n'ihu na ntanetị ịntanetị, ọ wetala nnukwu mmetụta na ọrụ ndị nrụpụta. N'okpuru ụdịrị nzụlite dị otú a, ọ bụrụ na ndị nrụpụta chọrọ ijigide uru ha na-aga na ntanetị iji wee nwee ike ịme mgbanwe na akụkụ atọ nke ndị ọrụ, ahịa na njikwa. Naanị site na ị na-agba mbọ na mmepe nke oge a ka ahịa agaghị ekpochapụ ya.
1. Gbanyụọ usoro azụmaahịa ọdịnala
Site na ire ngwaahịa na ọrụ ịre ahịa, mgbasa ozi na nkwalite ghọrọ ahịa netwọrị na ire okwu ọnụ. N'otu oge ahụ, ọ mebiri usoro ahịa. N'oge gara aga, ugwo bu njedebe nke ahia, ugbu a obu mmalite nke ahia. N'ihi na ịkwụghachi azụ abụghịzị ire nke ngwaahịa, mana ịnwere ozi nke onye ahịa, ị kwesịrị ị na-eso ozi a ma gaa n’ihu ịzụlite akụrụngwa.
2. Echiche nchịkwa ọhụụ
N'oge gara aga, arụmọrụ buru ibu, ọ bụrụhaala na iwu ahụ nwere ike ị nweta ụgwọ dị ala na nnukwu mkpụrụ, mana enweghị ike ijigide ndị ahịa ebighi ebi. Ugbu a bụ oge mmepe nke ntanetị ebe ọnụ ahịa na-enwu enwu, na-eduga n'ịkwụ ụgwọ dị elu na uru dị ala, yana nhụsianya nke ndị na-emepụta, na-eduga ọnwụ nke enweghị ihe ọhụụ, na ịtụ egwu ihe ọhụrụ. Gburugburu ụwa mpụga nke ndị na-emepụta hose clamps na-echewanyewanye, ihe isi ike nke ọrụ na-abawanye. Oge a siri ike na-etinye ihe dị elu n'ahịa. Otu esi mejuputa ihe ndi choro mgbanwe na nkwalite ire ahia, jikọtara ya na njikwa oru nke ndi na emeputa ihe, ndi na-emeputa ihe ndi choro ihiwe ihe ntanetị, mebe atumatu “belata ugwo oru”, ma wube usoro “nnukwu nyocha”, ka iji nweta mmeghari ngwa ngwa n’ebe gburugburu 3. A na-akwado atụmatụ a ike nke ukwuu.
Njikwa ahụ ga-eduzi ndị na-arụsi ọrụ ike ma belata ihe ize ndụ n'ụzọ dị irè karị.
Mmepe nke ịntanetị e-commerce emeela ka ọtụtụ ụlọ ọrụ hose hoop na-asọrịta mpi iji nweta "ụgbọ oloko ngwa ngwa" nke ndị na-ere ahịa e-commerce, ma ndị na-emepụta hose hoop na-eguzogide mmetụta nke e-azụmahịa na uru pụrụ iche ha, yabụ ụlọ ọrụ hose hoop na-etolite ọwa dị n'ịntanetị N'oge a, ọ dị mkpa iji nọgide na-ewusi owuwu nke ọwa na-anọghị n'ịntanetị, ka onye nrụpụta ọ bụla wee nwee ike ịnọgide na mmepe nke oge a, iji mee ka ụlọ ọrụ nwee ike ịga n'ihu.
Oge nzipu ozi: Apr-10-2020